Yekutanga inopa: Blackview BV8800 chete 225 euros | Gadget nhau
Ignatius Room | 10/01/2022 14:00 | Nhare mbozha
Blackview yakaratidza kubheja kwayo kutsva kwe2021 pakupera kwa2022. Tiri kutaura nezve Blackview BV8800, terminal inosvika pamusika nevamwe. kupfuura kuita kunokwezva uye kukosha kwemari. Kupemberera kutanga kwayo, tinogona kuwana mudziyo uyu chete 225 euros kuburikidza neAliExpress.
Kana uri kutsvaga nharembozha ine a processor ine simba, ndangariro yakakwana uye kuchengetedza Uye izvo zvakare zvinotipa iyo inonakidza seti yekamera uye inonakidza bhatiri, iwe unofanirwa kutarisa kune zvese izvo mudziyo uyu unotipa uye izvo isu zvakadzama pazasi.
Iyo ichangoburwa Blackview BV8800 inosanganisira nhamba huru ye kuvandudzwa zvichienzaniswa neshanduro dzakapfuura dzemugadziri uyu uye ine zvese zviri kuitika kuti ive foni yauri kutsvaga, zvisinei nekuti unoishandisa sei.
Kana iwe uchinakidzwa nekubuda kunze, iwe unofanirwa kuziva kuti iyo Blackview BV8800 inosanganisira MIL-STD-810H chitupa, seti yemakamera mana, anosanganisira kamera yekuona husiku uye bhatiri rinopfuura 4 mAh iyo yausingazonetseke nekuichaja nguva dzose.
1 Blackview 8800 Zvinotsanangurwa
2 Makamera kune chero chinodiwa
3 Simba rekunakidzwa kwakanyanya
4 Bhatiri kwemazuva akati wandei
5 Kuvhunduka uye kudonha kusagadzikana
6 90 Hz kuratidza
7 Inoenderana neGoogle Play
9 Nakidzwa nekupihwa
Blackview 8800 Zvinotsanangurwa
Operating system Doke OS 3.0 yakavakirwa paAndroid 11
Screen 6.58 inches - IPS - 90 Hz zorodza - 85% skrini reshiyo
Screen resolution 2408 × 1080 Full HD +
RAM ndangariro 8 GB
Battery 8380 mAh - Inotsigira 33W nekukurumidza kuchaja
Makamera ekumashure 50 MP + 20 MP + 8 MP + 2 MP
Mberi kamera 16 MP
Versión de Makaralı 5.2
WCDMA B1 / 2/4/5/6/8/9 ine RXD
CDMA BC0 / BC1 / BC10 ine RXD
Certification IP68 / IP69K / MIL-STD-810H
Colors Navy girini / Mecha Orange / Conquest Black
Vipimo 176.2 × 83.5 × 17.7mm
Weight 365 gramu
vamwe Dual Nano SIM - NFC - Fingerprint sensor - Kuzivikanwa kwechiso - SOS - OTG - Google Play
Makamera kune chero chinodiwa
Kusiyana nevazhinji vagadziri vepamusoro-soro, vanga vakanamira pa12 MP, Blackview inotipa iyo 50 MP main sensor, chigadziro chichatibvumira kuwedzera zvose zvatinotora uye kunakidzwa nezvinhu zvose zvinoratidzwa mairi.
Zvakare, pakudhinda, Hatina kuganhurwa saizi yakafanana kuti tinowana 12 MP chete. Uye zvakare, ine zvakare 20 MP sensor, yehusiku yekuona sensor iyo inozotitendera kutora mafoto nemavhidhiyo mune chero mwenje mamiriro.
Pamwe chete nemasensa ese, isu tinowanawo a Ultra yakafara angle sensor, sensor inotipa 117-degree angle yekuona uye 8 MP sensor iyo ine basa rekudzima kumashure kwemifananidzo yatinotora ine portrait mode.
Makamera ese anoshandisa Artificial Intelligence panguva yekugadzirisa, kuitira kuti uvandudze, kwete chete hutano hwekutora, asiwo kubvisa zvikanganiso zviduku.
Kumberi, Tinowana 16 MP kamera, kamera iyo inosanganisirawo mafirita erunako kuti tivandudze selfies yedu, kuderedza mitsara yekutaura, kusakwana uye zvimwe izvo, zvino, tinogara tichimanikidzwa kubvisa.
Simba rekunakidzwa kwakanyanya
Kunyangwe kunakidzwa nemitambo inonyanya kudiwa kana kuramba uchirekodha mavhidhiyo kana kutora mafoto, ne processor MediaTek Helio G96 hatizove nematambudziko ekuita.
Pamwe chete nekugadziriswa uku, kunodarika mazana matatu emazana mapoinzi mumabhenji eAnTuTu, tinowana. 8 GB ye RAM ndangariro mhando LPDDR4x uye 128 GB yemukati yekuchengetedza mhando UFS 2.1.
Ose ari maviri LPDDR4X ndangariro uye UFS 2.1 chengetedzo inotipa kukurumidza kwedata uye manejimendi yekushandisa iyo inodzivirira kunonoka kunosemesa, lags uye vamwe kuti isu tiri mune zvine mwero zviteshi.
Bhatiri kwemazuva akati wandei
La bhatiri uye kamera zvitsvene. Vese vashandisi vanoda kuvandudza terminal yavo yekare neitsva vanofanirwa kugara vachifunga izvi zvikamu zviviri. Takatotaura nezve chikamu chekamera chiri pamusoro.
Kana isu tichitaura nezve bhatiri, isu tinofanirwa kutaura nezve iyo 8.340 mAh inopihwa neBlackview BV8800. Iri bhatiri hombe, rinogona kugara kusvika kumazuva makumi matatu pakumira, tinogona kuita nzendo kuenda kumhepo yakavhurika nerunyararo rwakakwana rwepfungwa tisingatyi kuvharirwa.
Iyo Blackview BV8800 ndiyo 33W inokurumidza kuchaja inoenderana, iyo inotibvumira kuichaja mumaawa 1,5 chete. Kana tikashandisa yakaderera magetsi charger, nguva yekuchaja ichareba.
Zvinosanganisirawo rutsigiro rwe reverse kuchaja, iyo inotibvumira kuchaja zvimwe zvishandiso nebhatiri remudziyo uyu kuburikidza ne USB-C tambo.
Kuvhunduka uye kudonha kusagadzikana
Kufanana nemidziyo yakawanda kubva kumugadziri uyu, iyo BV8800 inotipa chitupa chechiutoChitupa chemauto chakagadziridzwa kumazinga matsva, zvichiita kuti ive yakakodzera kune avo vashandisi vanofarira kuita nzendo kuenda kunze.
Zvakare, nekuda kweiyo husiku chiratidzo kamera, tinogona kutarisa zviri nyore uye tisingashandisi tochi, kana kumativi edu kune mhuka kana, kuwana nhengo yeboka yatakarasa.
90 Hz kuratidza
Iyo skrini yeBlackview BV8800, inosvika 6,58 inches, ine FullHD + resolution uye skrini reyero ye85%. Asi, kukwezva kwayo kukuru kunowanikwa mukurongeka kwayo, chiyero chekuzorodza chinosvika 90 Hz.
Kutenda kune iyi yakakwirira yekuzorodza mwero, zvese zvirimo, zvese mitambo uye kubhurawuza kuburikidza nemaapplication uye mapeji ewebhu, ichaita seyakawanda mvura pane zvechinyakare 60Hz kuratidza, se90 mafuremu pasekondi acharatidzwa yega yega pane makumi matanhatu.
Inoenderana neGoogle Play
Mukati meBlackview BV8800, isu tinowana iyo yakasarudzika layer Doke OS 3.0, yakavakirwa pa Android 11 uye inoenderana nePlay Store, iyo inotitendera kuisa chero application inowanikwa muGoogle chitoro chepamutemo.
Doke OS 3.0 ndeye wongororo yakakura ichienzaniswa neDoke OS 2.0. Inosanganisira mamwe maratidziro ekufamba-famba, dhizaini iri nyore kushandisa, smart app preloading, notepad yakagadziridzwa inotsigira kunyora nemaoko uye izwi memo kurekodha ...
Seyakanaka terminal yakakodzera munyu wayo, iyo Blackview BV8800, inosanganisira ese ari maviri chigunwe chemunwe inosanganisirwa mubhatani rekutanga uye hurongwa hwe kuonekwa kwiso. Pamusoro pezvo, inosanganisirawo bhatani ratinogona kugadzirisa mashandiro ayo e7 akasiyana mabasa.
Iyo NFC chip haina kukwanisa kushaikwa pamudziyo uyu. Kutenda kune iyi chip, tinogona kubhadhara kune chero bhizinesi nekadhi redu rechikwereti pasina kutakura chikwama chedu uye zvifambiso zveveruzhinji.
La kuvhura kukwidziridzwa izvo zvinotitendera kuti titore iyo Blackview BV8800 ye chete 225 euros VAT uye kutumira kunosanganisirwa, inogumira kumayuniti mazana mashanu ekutanga. Kana iwe uchida zvese izvo iyi nyowani Blackview terminal inokupa iwe, usafunge kaviri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » Nhare » Nhare mbozha » Kutanga kupihwa: Blackview BV8800 ye225 euros chete
Kurota D9 Max, ongororo yeazvino yepamusoro-inoshanda robhoti vacuum cleaner